TicWatch Pro 4G / LTE: Famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Mobvoi dia iray amin'ireo marika mavitrika indrindra amin'ny sehatry ny smartwatch, noho ireo maodelin'ny TicWatch. Ny orinasa Manolotra amin'ny fomba ofisialy ny TicWatch Pro 4G / LTE. Izy io dia famantaranandro vaovao izay nanampian'izy ireo ny fifandraisana 4G ho zava-baovao. Araka ny efa hitantsika tamin'ny famantaranandro hafa an'ny marika, Wear OS dia ampiasaina ho rafitra fiasa.
Ary koa, araka ny hitantsika tamin'ny famantaranandrony teo aloha, ny TicWatch Pro 4G / LTE dia mitazona ny efijery roa sosona. Fiasa iray izay nanjary nalaza tamin'ny marika ary mamela hamonjy bateria ao anatiny. Ny iray amin'ireo kintana dia miasa ao. Inona koa no azontsika antenaina amin'izany?
Ny zava-misy fa tonga miaraka amin'ny 4G ity TicWatch Pro 4G / LTE ity, satria manampy tsy miankina amin'ny smartphone. Ka ny fananana SIM ao anatiny dia afaka mandray antso sy fampandrenesana amin'ny fotoana rehetra isika. Avelao ihany koa ny fampifanarahana ny data miaraka amin'ny rahona. Afaka mahazo betsaka amin'izany ianao.
Mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy ny famataranandro hijerena ny fanatanjahantena izay mandeha ho azy. Ka tsy mila hampihetsika azy amin'ny fotoana rehetra ilay mpampiasa. Ny lahasa TicMotion 2.0 dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana angona momba ny hetsika sy ny tahan'ny fo dia arahi-maso tsy tapaka koa. Mikasika ny famolavolana dia tsy mahita fiovana amin'izany isika.
Izy io dia miaraka amin'ny efijery roa, izay ahafahantsika mivadika eo amin'ny Smart Mode sy ny Essential Mode. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny TicWatch Pro 4G / LTE fanampiana ho an'ny Google Assistant, Google Pay ary NFC. Azontsika ampiasaina amin'ny fandoavana vola any amin'ny magazay izany. Ny tontonana AMOLED habe 1,4-inch dia mijanona mitovy amin'ity tranga ity. Raha mampiasa Snapdragon Wear 3100 ho toy ny processeur.
Amin'izao fotoana izao dia any Etazonia ihany no mivoaka, izay mitentina 279 euro (eo amin'ny 248 euro eo ho eo no miova). Tsy mbola misy vaovao hatreto momba ny mety fandefasana an'ity TicWatch Pro 4G / LTE any Eropa ity. Saingy azo antoka fa hitranga tsy ho ela izany, noho izany dia hitandrina ny vaovao rehetra avy amin'ny orinasa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » TicWatch Pro 4G / LTE: famantaranandro vaovao an'ny marika
Navigator GPS maimaim-poana mahatalanjona miaraka amin'ny fisintomana sarintany maimaim-poana amin'ny fitetezana ivelan'ny Internet
Geekbench dia manamafy fa ny Samsung Galaxy A90 dia miaraka amin'ny Snapdragon 855